Indlu yesikolo esidala abantu aba-2 abanegadi yokuphumla - I-Airbnb
Indlu yesikolo esidala abantu aba-2 abanegadi yokuphumla
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAnique
Xa iyi-360 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Kumda wombindi weHeerlen, kwisithili esithandwayo esiluhlaza eBekkerveld, kukho isikolo samabanga aphantsi esidala salungiswayo ngoku esisetyenziswa njengendawo yokuhlala. Kule ndawo ikhethekileyo,
igumbi likatitshala elidala liguqulwe ngokupheleleyo laba ligumbi labantu ababini. Indawo yokuhlala inomnyango wabucala kwaye iyakwazi ukuzimela ngokupheleleyo.
Ungayimisa imoto yakho ngaphandle kwentlawulo phambi komnyango kwibala lesikolo elidala.
Uhola wendlela unokufikelelwa kwimizuzu emi-4. Maastricht 20km Aachen 15 km
Le ndlu inegumbi lokuhlala lasekhaya elinesofa yekona kunye neTV. Ikhitshi enezixhobo ezipheleleyo ezakhelwe ngaphakathi, kubandakanya isitya sokuhlamba izitya, isitovu sokungeniswa, umatshini weNespresso kunye nemicrowave. Igumbi lokuhlambela elitsha lixhotyiswe ngeshawari yemvula kunye nesinki enkulu, kukwakho nendlu yangasese eyahlukileyo.
Kumgangatho ophakamileyo kukho ibhedi entle elingana nokumkani (180-200).
Entsha yigadi yabucala yokuphumla esandul' ukwenziwa inesofa yekona etofotofo kunye netafile yokutyela kunye nezitulo. Oku kubucala ngokupheleleyo kwiindwendwe zethu.
Yiza uzonwabele ilanga laseLimburg
I-wifi ekhawulezayo – i-360 Mbps
4.89 · Izimvo eziyi-103
Isithili sase-Bekkerveld sikumgama wokuhamba (imizuzu esi-7) ukusuka kumbindi we-Heerlen.
Kumnandi ukuhlala kule ngingqi ilungele abantwana. Indlu yethu yesikolo endala ikwi-Bekkerveld apho uMnyhadala weParkcity Live ubanjwa minyaka le. Nangona kunjalo indawo ibonakalisa ukuzola kwaye akukho nkathazo yendlela.
I-Keurslager kunye ne-Bakker zikufutshane nekona yeflan yakho entsha yaseLimburg okanye ezinye iimveliso zengingqi ezimnandi. Kwakhona iivenkile ezinkulu ezimbini kumgama wokuhamba.
Umbindi weHeerlen uphithizela ngeeprojekthi ezivelisa izinto ezintsha ezifana nemizobo yasezidolophini (imizobo eludongeni) okanye uluhlu olubanzi lwemidlalo yethiyetha kwiparkstadlimburgtheater. Umnyhadala wethiyetha waminyaka le weCultura Nova yinto eyenzekayo ekufuneka uye kuyo!
I-Heerlen ngokuqinisekileyo ibekwe kumda we-Heuvelland kwaye ithandwa nguye wonke umkhweli webhayisikile kunye nomhambi.
Kodwa indawo ye-Euregional kufutshane neAachen, eLiège, eHasselt nayo yenza esi siseko esihle. I-Aachen, iValkenburg kunye neMaastricht nazo zifikeleleka lula ngezithuthi zikawonke-wonke, ngebhasi okanye ngololiwe.
Ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukuya kweli-15 ukwindawo yokutyibilika enkulu yangaphakathi yaseYurophu kwilizwe lekhephu. Okanye uye eGaiaZOO eKerkrade. Maninzi amava kwaye sihlala sifumaneka ngeengcebiso kunye neeresityu
Umbuki zindwendwe ngu- Anique
Samen met mijn man Axel wonen we in een voormalige basisschool die we volledig gerenoveerd en verbouwd hebben tot woonhuis. We hebben twee kinderen, een zoon van 9 en dochter van 7.
Silusapho olunabantwana ababini abahlala kwindlu ekufutshane kwaye ke bayafumaneka kuyo yonke imibuzo yakho. Iyafumaneka nangefowuni.
Unako kwakhona ukuhlala bucala ngokupheleleyo. Indawo yokuhlala inomnyango owahlukileyo